यी ५ राशिहरु माथि भोलिबाट रहनेछ ब्रह्मादेवको विशेष कृपा, चम्किनेछ भाग्य, जान्नुहोस् कुन-कुन राशि हुन् त ? « Nepal's number 1 Entertainment news portal
यी ५ राशिहरु माथि भोलिबाट रहनेछ ब्रह्मादेवको विशेष कृपा, चम्किनेछ भाग्य, जान्नुहोस् कुन-कुन राशि हुन् त ?
Published :2June, 2018 4:59 pm
भोलि २७ अप्रिल अर्थात बैशाख १४ गतेको दिनबाट १२ राशिहरुमध्ये केही राशिहरुमा भगवान ब्रह्मादेव जीको विशेष कृपा रहनेछ । जसको फलस्वरूप २७ अप्रिल देखि ती राशिहरुका व्यक्तिका कुण्डलीमा धनको वर्षा हुने सम्भावना छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार २७ अप्रिलबाट ब्रह्मादेवको विशेष कृपाले ती राशिका व्यक्तिहरुले अचानक धन लाभ गर्न सक्ने योग देखिएको छ र यो अत्यन्तै किस्मत वाला साबित हुनेछ । साथै जीवनमा सफलताको नयाँ उचाई छुन सक्ने देखिन्छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार भोलि २७ अप्रिल/१४ बैशाखबाट मेष राशिका व्यक्तिहरु माथि ब्रह्मादेवको कृपा रहने देखिन्छ, जसको कारण यस राशिका व्यक्तिका कुण्डलीमा धन लाभ प्राप्तिको योग बन्ने छ । रोकिएका कार्यहरुले सफलतापूर्वक पूर्णता पाउनेछ ।
यी राशिका व्यक्तिहरुले किस्मतको पूरा साथ प्राप्त गर्नेछन । भोलि २७ अप्रिल पछि यस राशिका व्यक्तिहरुले स्वयमलाई भाग्यमानी महसुस गर्नुहुनेछ । व्यवसायमा अपार धन लाभ प्राप्तिको योग बनेको छ । स्वदेश या विदेश यात्राका लागि वातावरण अनुकूल रहनेछ ।
सिंह राशिका व्यक्तिहरुका लागि भोलि १४ बैशाख/२७ अप्रिलबाट अत्यन्तै शुभ रहने छ । यस राशिका व्यक्तिहरुमाथि ब्रह्मादेवको अपार कृपा दृष्टि बन्ने छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस राशिका व्यक्तिहरुका कुण्डलीमा धेरै परिवर्तन आउँन सक्छ ।
अचानक रोकिएका सबै कामहरु पूरा हुनेछ । भाग्यले पूर्ण रुपले साथ दिनेछ जसको कारण जुन सुकै काम गरे पनि सफलता मिल्नेछ । वादविवादबाट टाढै रहनुहोला । व्यापारमा अत्यधिक धन लाभ हुनेछ र व्यापारमा विस्तार पनि हुन्छ । यात्रा योग बनेको छ । जीवनबाट धन सम्बन्धी सबै सबै समस्याहरु हट्नेछ ।
कन्या राशिका व्यक्तिहरु माथि भोलि १४ बैशाख/२७ अप्रिलबाट ब्रह्मादेवको कृपा दृष्टि बन्ने छ । जुन सुकै काम गर्दा पनि त्यसमा निश्चित रुपमा सफलता प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्य जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत हुनेछ ।
घरपरिवारमा शान्तिपूर्ण र राम्रो वातावरण बन्नेछ । विद्यार्थीले शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नेछन । रिस नियन्त्रणमा राख्नुहोला, अन्यथा बित्थाका समस्या सिर्जना हुन् सक्छ । आवेशमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला, भविष्यमा पश्चाताप हुन् सक्छ । आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत बन्नेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुले भोलि २७ अप्रिल/१४ वैशाखबाट ब्रह्मादेवको विशेष कृपा प्राप्त हुने योग छ । जसको कारण जीवनमा सफलता प्राप्त हुनेछ ।व्यापारमा भारी धन लाभ हुने प्रबल सम्भावना बन्ने छ । विद्यार्थीको लागि यस समय अनुकूल रहनेछ । व्यापारमा अपार धन लाभ हुनेछ, सापटी दिएको रकम फिर्ता हुन् सक्ने सम्भावना बन्ने छ । ब्रह्मादेवको कृपा दृष्टिले तपाईको सबै इच्छाहरु पूर्ण हुनेछ । तपाईको वैवाहिक जीवन सुखमय रहनेछ । परिवारमा सुख शान्तिको आगमन हुनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरु माथि २७ अप्रिल/१४ बैशाख बाट ब्रह्मादेवको विशेष कृपा रहनेछ, जसको कारण अचानक धन लाभ हुने योग बन्ने छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार २७ अप्रिलबाट मीन राशिका व्यक्तिहरुलाई भाग्यले पूरा साथ दिनेछ । जसको कारण जुन सुकै क्षेत्रमा लागे पनि सफलता अवश्य प्राप्त हुनेछ ।
जीवनसाथीको पूरा सहयोग मिल्नेछ । कुनै पनि कार्य गर्दा माता-पिताको आशिर्वाद अवश्य लिनुहोला । तपाईको कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यवसायमा उत्तम धन लाभ मिल्नेछ । आर्थिक स्थिति मजबूत बन्नेछ ।
एकाविहानै सच्चामनले पशुपति नाथको दर्शन गरि, आजको राशिफल हेर्नुहोस !
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आँटेको र ताकेको कार्य पुरा
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) रमणीय र सुखद् यात्राको योग
आज शनिबार शनिदेवको पूजा कसरी गर्ने ?
शास्‍त्रको अनुसार शनिदेव सूर्य देव र देवी छायाका पुत्र हुन। इनको जन्म ज्येष्ठ महिनाको अांवस्यामा